सुन्दै अचम लाग्ने आखिर किन गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ? - ramechhapkhabar.com
सुन्दै अचम लाग्ने आखिर किन गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ?
अमेरिकी किसानहरुले यसरी निकै डरलाग्दो गरी गाईको पेटमा प्वाल पार्ने गर्दछन । किन यसरी पशुलाई दुख दिएका होलान यी अमेरिकनले भनेर बुझ्दै जाँदा यो त नयाँ र अचम्मको प्रविधि पो रहेछ । यसो गर्नुको कारण पनि बडो आस्चर्यलाग्दो नै छ। यो अनौठो र डरलाग्दो जिउँदो गाइकै पेटमा ठुलै प्वाल पर्नुको कारण गाईको आयु बढाउन र स्वास्थ्य जाँच गर्न सहज पर्न रहेछ ।